Madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay sharciga isgaarsiinta – Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya oo saxiixay sharciga isgaarsiinta
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay oo Isniin ahayd saxiixay sharciga isgaarsiinta ee bishii Agoosto ee sanadkan ay ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka, horayna ay u soo gudbisay xukuumadda.
Madaxweynaha oo ka hadlay bandhig uu sharcigan ku saxiixayay oo lagu qabtay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay in caqabado badan oo ka dhashay burburka hay’adihii dowladda ay jiraan, kuwaas oo aan muddo kooban lagu xallin karin.
Bandhiggan waxaa ka qeyb galay guddoomiyaha aqalka sare, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya ahna ku simaha guddoomiyaha Cabdiweli Ibraahim Sheekh Muuddey, raysu wasaare ku-xigeenka xukuumadda, Mahdi Maxamuud Guuleed, wasiirro, xildhibaanno iyo khubarradii ka soo shaqeeyay diyaarinta sharcigan.
Wasiirka Boostada, Isgaarsiinta iyo Teknaloojiyada, Mudane Cabdi Cashuur Xasan ayaa sheegay in sharcigaan oo uu ku tilmaamay mid ahmiyad weyn u leh dalka uu yahay kii ugu wakhti dheeraa dhanka ansixinta maaddaama laga soo shaqeynayay tan iyo sanadkii 2005.
Ma sax baa sida ay dowladda hoose ee Xamar u wajahday nadaafadda iyo nalalka guryaha?
Sharciga Axsaabta Siyaasadda Dalka